Farmaajo oo Ciidanka Gorgor hoos geeyay taliye ku heyb ah | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo Ciidanka Gorgor hoos geeyay taliye ku heyb ah
Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, waxuu kasoo jeedaa beesha Mareexaan, isagoo kamid ah taliyeyaal dhowr ah oo dhawaan Farmaajo dalacsiiyay, kadibna xilal sare u magacaabey.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xili dalka ku jiro kala-guur, oo doorasho la galaya, Farmaajo ayaa billaabey isbedel bedel inuu ku sameeyo Ciidanka xoogga dalka, oo taliskooda u gacan geliyay taliyeyaal ay isku beel yihiin, kana soo jeeda beesha Mareexaan.
Madaxweyne Farmaajo oo mudo-xileedkiisa uga harsan 2 bilood ayaa u muuqda inuu noqday kaligii-taliyaha cusub ee Soomaaliya kadib adeerkiisa Maxamed Siyaad Barre, oo xukunka laga tuurey 30 sano kahor.
Keydmedia Online ayaa warbixino badan kasoo qortay qorshaha Farmaajo ee xagga Ciidanka qaranka, isagoo rabo inuu u adeegsado wadanka inuu ku qabsado, waxaana jirta in Ciidamo loogu tababarayo Eritrea, oo dhowr jeer uu booqday labadii sano ee lasoo dhaafay.
Waxay dadka aqoonta u leh arrimaha amniga ku tilmaameen tallaabada Farmaajo mid awood-aruursi ah [Power consilidation], maadaama taliskii Ciidanka dalka u dhiibay taliyeyaal ay isku heyb yihiin, isagoo ka wareejiyay beelaha kale.
Tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaadey Farmaajo waxay ahayd inuu taliska Ciidanka sida gaarka ah u tababarey Turkiga ee loo yaqaano Gorgor, uu ka wareejiyay Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage, oo ah taliyah guud ee Militeriga, waxuuna u dhiibay Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, waxuu kasoo jeedaa beesha Mareexaan.
Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, ayaa si qarsoodi ah Farmaajo dhawaan ugu magacaabey taliyaha Ciidanka dhulka, isagoo la siiyay awoodo dheeraad ah, oo ay kamid tahay inuu maamuli doono Ciidaka Gorgor.
Hay'adda Nabad Sugida ayuu horey gacanta ugu geliyay Fahad Yaasiin oo ay isku qorsho yihiin, wuxuuna hadda Gorgor u dhiibay ina adeerkiisa xili doorasho dalka uu galayo, oo musharaxiinta walaac ka muujiyeen xubnaha NISA ee lagu daray gudiga doorashooyinka.